Dhakhtar sameeyay in ka badan 37,000 oo qalliino bilaash ah | Radio Himilo
Home / Arrimaha Bulshada / Dhakhtar sameeyay in ka badan 37,000 oo qalliino bilaash ah
Himilo – Dhakhtar u dhashay dalka Hindiya oo ku takhasustay qalliinka balaastiigga ah ayaa lagu ammaanaa inuu yahay geesi aan koofiyad lahayn ka dib markii uu in badan oo noloshiisa ka mid ah ku qaatay samaynta in ka badan 37,000 oo hab-raacyo bilaash ah si uu u saxo jeexjeexyada iyo dillaaca faruuryaha carruurta.
Marka loo eego CDC-da, jeexjeexa faruuryaha iyo dilaaca waa cillado lagu dhalasho oo yimaadda marka bushimaha ama afku u samaysmi waayaan si habboon xilliga uurka. Cilladahani waxay keenaan dhibaatooyin kala duwan, kuwaas oo isugu jira caano la’aanta marka ay dhallaan yihiin, cagajuglaynta iyo takoorka nolosha dambe.
Labada cillad ee lagu dhasho waa la sixi karaa iyadoo la kaashanayo qalliin caag ah, laakiin nidaamyadan, nasiib darro, ma helaan qoysaska saboolka ah ee aadka ugu baahan. Dalka Hindiya, hal dhakhtar oo qalliin balaastiig ah sameeya ayaa u soo baxay inuu waxtar u leeyahay tobanaan kun oo dhalaanka iyo carruurta ah, isagoo si bilaash ah u saxaya faruuryaha dillaacsan ama jeexjeexyada leh, sidaas darteedna fursad u siinaya inay helaan nolol aad u wanaagsan.
Wuxuu ka dhashay qoys sabool ah oo ku nool Varanasi, oo ku yaal gobolka Uttar Pradesh ee Hindiya, Dr. Subodh Kumar Singh waa mid ku guuleystay in uu ka caafmaado dhibta soo food saartay carruurnimadiisii, taas oo ku dhiirigelisay inuu u huro xirfaddiisa si uu u caawiyo dadka baahan, halkii uu ka raadin lahaa faa’iido dhaqaale.
Ka dib markii uu waayey aabbihiis, shaqaale tareen, isaga oo 13 jir ah, Subodh iyo saddex walaalihiis ka weyn waxay ku qasbanaadeen inay masruufaan qoyska iyagoo ku iibinaya shumacyo guri, saabuun iyo muraayadaha guryaha waddooyinka iyo dukaamada xaafadda.
Subodh walaalihiis waxay ka tageen waxbarashadii si ay qoyska u taageeraan, laakiin waxay ku dadaaleen inuu sii wato waxbarashadiisa oo uu fuliyo riyadiisa ah inuu noqdo dhakhtar. In kasta oo uu walaalkii caawiyay intii karaankiisa ah, isaga oo ka shaqeeyay dhawr shaqo intii uu waxbarashadiisa sii watay, Subodh Kumar Singh waxa uu ka qalin jabiyay machadka culuumta caafimaadka, waxa uu dhammaystay heerka labaad ee jaamacada masterka qalliinka guud, waxana uu ku takhasusay qalliinka caagga ah.
“Carruurnimadaydii waxay i siisay awood aan ku dhiso adkeysiga iyo horumarinta fahamka dadka ku jira halgan maalinle ah,” Dr. Singh ayaa u sheegay The Better India. “Dhibaatooyinka ayaa iga dhigay inaan dareemo shucuurtooda oo aan la xiriiro. In aan dhakhtar noqdo ayaa i galisay meel aan ku caawiyo qaar badan. Waxaan doonayay inaan nolosha dadka danta yar ka dhigo mid wanagsan.
Isaga oo garwaaqsaday in dhallaanka iyo carruurta ku dhasha faruuryo dildilaaca ay u baahan yihiin caawimo, dhakhtarkii qalliinka balaastigga ahaa waxa uu bilaabay in uu abaabulo kaamam caafimaad oo lacag la’aan ah iyo in uu caawiyo inta bukaan ee uu kari karo. Dadaalkiisa waxa markiiba ogaaday Train Smile, oo ah hindise caalami ah oo diiradda lagu saaray qalliinka dillaaca. Taageeradooda, iyo tan NGO-yada kale, Dr. Singh wuxuu caawin karaa xitaa dad badan.
“Carruurtan ma heli karaan caano sidii loo baahnaa. Kuwo badan ayaa u dhinta nafaqo-xumo oo inta badan koriimadoodii ayaa yaraatay. Carruurtu way ku adag tahay inay carrabka isticmaalaan si ay u hadlaan, taas oo keenta dhibaatooyin xagga hadalka ah,” Dr. Subodh Kumar Singh ayaa sheegay in uu saxo. “Caruurtu waxay inta badan ka tagaan dugsiga sababtoo ah hadalkooda ama cagajuglaynta. Waxay u arkaan inay ku adag tahay inay shaqo raadiyaan ama helaan aqbalaad. Marar badan, hooyada waxaa lagu eedeeyaa, inkaar iyo in lagaga tago inay qaado ilmo faruuryo dillaacsan. Waxay kaloo saameyn nafsiyeed ku leedahay waalidiinta. Laakiin qaliinka ayaa xallin kara dhammaan.”
Tan iyo markii uu bilaabay safarkiisa pro bono 2004, Dr. Singh wuxuu sameeyay in ka badan 37,000 habraac oo ku saabsan carruurta iyo dadka waaweyn labadaba. Isagoo kaashanaya dhoola cadeyn, wuxuu sidoo kale awooday inuu tababaro daraasiin dhakhaatiir kale ah oo ku baahsan Hindiya si loo saxo cilladahaan ku dhalashada ah wuxuuna rajeynayaa inuu maalin uun awood u yeesho inuu sameeyo xarun qaran oo lagu saxo qalliinnada faruuryaha ee dillaacsan.
“Waan ku faanayaa in aan leeyahay awood aan ku beddelo nolosha dad badan,” Dr. Subodh Kumar Singh ayaa yidhi. Hal qalliin ayaa si togan u saameeya in ka badan hal qoys iyo nolosha qofka.Wax farxad iga siiya ma jiro oo aan ka ahayn in aan dib u mideeyo qoysaskii aqbala inanta ay soddohda u yihiin qaliinka ka dib oo aan iyada ku eedayn cilladda.
Xirfadda Dr. Singh waxa ay ina xasuusinaysaa tii dhakhtarka indhaha ee Nepalese Sanduk Ruit, aka the God of Sight, kaas oo keligiis ku guulaystay in uu soo celiyo aragga in ka badan 100,000 oo qof oo ku kala nool labada qaaradood.
Previous: Wargeysyada ugu waawayn Spain oo weerar ku qaaday UEFA
Next: Xaqiiqooyin ku saabsan dhismaha ugu dheer caalamka